GUDAHA ARDAYGA | ALC Ozaukee
Haddii aad rabto inaad sare u qaaddo Ingiriisigaaga sida xirfadaha Luuqadda Labaad, kasbato GED-gaaga, noqoshada Muwaadin Mareykan ah, ama aad si fudud u awoodo inaad dhammaystirto shaqooyinka maalinlaha ah adiga oo aan ka helin tarjumaan, ALC way caawin kartaa! Fiiri bogga barnaamijyadeena ku xiran barnaamijkayaga ardayda, ama riix batoonka hoose si aad u aqriso dhamaan barnaamijyada kala duwan ee aan bixino.
Wax dhigista oo dhan ee loo maro ALC waa bilaash. Arday kasta wuxuu kuxiran yahay macalin, waxayna awoodi karaan inay la kulmaan hal-mar waqti kasta oo ku haboon ardayga iyo macalinka. Ardayda iyo barayaasha waxay ku kulmi karaan ALC, maktabad xaafadeed ama gebi ahaanba. Ardayda ayaa mas'uul ka ah lacag hal mar ah $ 25 oo ah khidmadda diiwaangelinta oo waa inay iibsadaan buugaagtooda (qiyaastii $ 30). Haddii loo baahdo, ardaydu waxay dalban karaan deeq waxbarasho si ay u daboolaan kharashaadka diiwaangelinta iyo khidmadaha buugga.
Waxaan had iyo jeer raadineynaa arday cusub. Haddii aad xiisaynayso wax adeegyo ah oo ku saabsan ALC, buuxi foomka hoosta ku yaal, oo waxaan kugula soo socon doonnaa tallaabooyin dheeri ah. Kama sugi karno inaad ku bilowdo safarkaaga ALC!
Bixi khidmadaha ardayda